I-Meltblown engekho yelaphu yengubo abavelisi kunye nabaxhasi | URayson
I-Meltblown engenangubo ephothiweyo Yenziwe ngobuchule obukhethekileyo bokuvelisa ilaphu elingalukwanga ngemicu emihle kakhulu. Ilaphu elinyibilikisiweyo elingaphothiyo liyinto ebalulekileyo yokwenza iimaski zobuso ezikhusela abasebenzi bezonyango kwi-coronavirus entsha. Eli laphu lokucoca ulwelo linyibilikisiweyo lelona candelo liphambili lokuphefumla elinokubonelela uninzi lokhuselo. Ingasetyenziswa ngokubanzi kwisiphefumli esilahlayo, iimaski zotyando, iimaski zobuso, izixhobo zokuphefumla zothuli ezisetyenzisiweyo, kunye nokuphefumla kotyando. Njengoko intsholongwane isasazeka kwihlabathi liphela, ezo buso zobuso zinqabile.
I-Melblown Ilaphu le-25GR ye-Mask
Yintoni ilaphu elinyibilikisiweyo elenziwe?I-Meltblown Ilaphu elilukiweyo yenziwa kwindlela ekhethekileyo yokuphucula ilaphu elilukiweyo ngeentsinga ezintle kakhulu. I-meltblown ilaphu elilukiweyo yeyona ndawo iphambili kwimaski enokubonelela uninzi lokhuseleko. Ilaphu elingeluki le-mask linomsebenzi we-apptrostatic ashsostatic, onokuthi agcine iintsholongwane. I-Rayson yi-met inyibiliki yomenzi welaphu, ukubonelela nge-meltblown ilaphu le-25gr ye-Mask.
I-Meltblown Ilaphu elilukiweyo
Ukunyibilikisa ilaphu elingowalukiweyo lenziwe kwindlela ekhethekileyo yokuphucula ilaphu elihle kakhulu le-fibers ehle kakhulu esetyenziselwa iimveliso ezahlukeneyo, ngakumbi i-20G / GSM-150G / GSM. I-BFA 99% inyibilike isetyenziselwa ukuvelisa iimaski zonyango, imaski yobuso bookhokho, kwaye ithengise kakuhle kwaye ithandwayo kwicandelo lamashishini ahlukeneyo. I-microfibers ibonelela ngendawo ephezulu yendawo yokufakelwa i-insultives elungileyo kunye ne-sllive piestionals Ithintela usulelo oluwela phakathi kwabantu kunye nokusasazeka kweentsholongwane ezahlukeneyo kumaxesha ahlukeneyo. Ingayithintela ngokufanelekileyo iPollen Alligy kwaye inciphise ingozi yezinto eziyingozi emzimbeni womntu. Ibabalwe ngoogqirha, abongikazi, kunye nabanye abasebenzi kwezonyango.
I-Addrostatic Adsostatic meltblown ilaphu le-25GR ye-maski
I-meltblown ilaphu lenziwe kwindlela ekhethekileyo yefatriki engacalulikiyo enamafutha acocekileyo. inkalo yayo adsorption electrostatic ogcina ngaphandle iintsholongwane.